Global Voices teny Malagasy » Maraoka : Ka ny bolongan’iza ary no BOMB e? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Marsa 2010 13:10 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Maraoka, Hevitra, Tanora, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Ny fifaninanana Best Of Morocco Blog ,[Bolongana Maraokana Tsara indrindra] na ny BOMBies, no fifaninanana famahanam-bolongana fanao isan-taona farany indrindra. Mifantoka amina bolongana miteny anglisy izy ity. Nikatona tamin'ny 21 febroary 2010 ny fifidianana izay hofantenana tao anaty sokajy dimy samihafa. Nanambara  ny lisitra fenon'ny voafantina sy ny nandresy ny MoroccoBlogs.com  izay mampiantrano ity fifaninanana ity.
Ny bolongana Près du puits  no tonga voalohany ho bolongan'olona iray tsara indrindra (Best Personal). Ny Culture Vultures Fez  no nandrombaka ny Bolongan-kolontsaina tsara indrindra (Best Morocco Culture Blog), raha ny The Elephant Cloud  no nitarika tao amin'ny sokajim-pizahatany ( Best Morocco Travel Blog).
Nilaza ny fihetseham-pony i Evelyn in Morocco , izay niandry fatratra ny valim-pifaninanana, ka faharoa tamin'ny bolongana maraokana tsara indrindra amin'ny rehetra (Best Overall):
Ny fandaharana manaraka moa dia ny Blog Camp , izay heverin'ny MoroccoBlogs.com hotontosaina amin'ny volana mey any an-tanànan'i Fez. Ity no andiany voalohany hotontosaina any Maraoka, araka izay nohazavain'i  Vago Damitio ao amin'ny The View From Fez:
Fanararaotra io ho an'ny mpamaham-bolongana manerana an'i Maraoka hivory, hanao atrikasa, ary hilanona ao Fez. […] Mihamaro moa ny olona liana amin'ity Blog Camp hatramin'ny nitenenako azy hatramin'ny voalohany, ary misy aza ny sangany amin'ny mpamaham-bolongana manerantany no liana! Azo eritreretina fa mety ho afa-mifaninana amin'ny Fetiben'ny Mozika Masina  eo amin'ny resaka isan'olona mety ho tonga eto Maraoka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/05/5222/
 Ny fifaninanana Best Of Morocco Blog: http://moroccoblogs.com/2010/01/best-of-morocco-blog-awards/#utm_source=feed&utm_medium=feed&utm_campaign=feed
 nifanatsafa tamin'i : http://riadzany.blogspot.com/2010/02/moroccan-blogs-vago-speaks.html
 Fetiben'ny Mozika Masina: http://www.fesfestival.com/2010/index.php